Hay?adaha la dagaalanka musuqmaasuqa Uganda oo xir xiray Soomaali ku eedeysan wax is-dabamarin – Radio Daljir
Hay?adaha la dagaalanka musuqmaasuqa Uganda oo xir xiray Soomaali ku eedeysan wax is-dabamarin
Oktoobar 26, 2013 3:20 b 0
Kampala, October 26, 2013 – Magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa lagu xiray tobbanaan Soomaali ah oo ku eedaysan falal musuqmaasuq iyo wax is dabamarin, xili ay socdaan howlgalo baaxad leh oo dalkaas ka socda.
12 ruux ayaa la xaqiijiyey in ay yihiin Soomaalida xiran ee la qabtay, waxaana si rasmi ah loogu eedeyey khaladaad ay ka galeen sharciga dalkaas iyagoo adeegsaday waxyaalo ka baxsan xeerarka.
Guddiga sare ee jaaliyada Soomaalida Uganda ayaa sheegay in ay dadaal ugu jiraan sidii loo sii dayn lahaa dadka Soomaalida ee xiran.
Howgallada Uganda oo ah kuwa noocyo badan balse u badan dhinaca amniga ayaa waxaa garab socda kuwa lagula dagaalamayo musuqmaasuq iyo wax is-daba marinta.
Bulshada Soomaalida Kampala ayaa toddobaadkii hore waxay la kulmeen madaxda ciidamada booliska, nabadsugida iyo hay?adaha kale ee amniga ka shaqeeya, waxaana shirkaas nuxurkiisu ahaa in amniga laga wada shaqeeyo.
Ciidamada dowladda iyo Ehellusuna oo dagaal khasaare dhaliyey ku dhexmaray qaybo ka mid ah Gedo
Baahin: Khamiis 24 Oct -2013, Caawa Iyo Daljir, Weriye Khadar Cawl Ismaaciil ~ Daljir ~ Buuhoodle